प्लस टु पछिकाे गन्तव्य-४
कक्षा १२ पछि के पढ्ने ? कुन विषय पढेकाले के पढ्न पाउँछन् ? पढेपछि के बन्ने ? के कस्ता अवसर छन् ? विषय कसरी छनोट गर्ने ? नेपालमा के कस्ता विषयको पढाइ हुन्छ ? विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कुन विषय उपयुक्त हुन्छ ? यी र यस्तै प्रश्नलाई समेटेर कक्षा १२ उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीलाई विषयको महत्त्व, सम्भावना, छनोट आदिका विषयमा सहयोग गर्न शिलापत्रले ’प्लस टु पछिको गन्तव्य ’ स्तम्भ सुरु गरेको हो । विद्यार्थी र अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो स्तम्भ फलदायी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । जसअन्तर्गत आज हामीले ब्याचलर इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट (BHCM)बारे सामग्री तयार पारेका छौं ।
के हो बीएचसीएम ?
ब्याचलर इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट (बीएचसीएम) भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने शिक्षा हो । म्यानेजमेन्टको ५० प्रतिशत र स्वास्थ्यको ५० प्रतिशत विषय समावेश गरेर बीएचसीएम कोर्स तयार पारिएको हुन्छ । यो म्यानेजमेन्ट, हेल्थ र आईटी समायोजन गरेर बनाइएको कोर्स हो । बीएचसीएम बिरामीको केयर गर्ने शिक्षा होइन । यसले स्वास्थ्य संस्थाको निगरानी गर्छ । बीएचसीएम कोर्सले स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ ।
स्वास्थ्य संस्था चिकित्सक र नर्सले मात्र चल्दैन । स्वास्थ्य संस्थालाई चुस्त रुपमा चलाउन व्यवस्थापकको आवश्यकता पर्छ । स्वास्थ्य संस्थाका लागि चाहिने आवश्यक वस्तुको प्रबन्ध गर्नुका साथै चिकित्सकको समेत व्यवस्थापन गर्ने भूमिका बीएचसीएम पढेर जागिर खाएका व्यक्तिको काँधमा रहन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासनिक काम पनि व्यवस्थापकको हातमा हुन्छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा लिन आएका बिरामीलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने काम पनि व्यवस्थापककै हो ।
कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा पढेकाले पढ्न पाउँछन्
ए लेभल र सीटीईभीटीबाट डिप्लोमा तह पास गरेकाले पढ्न पाउँछन्
११ र १२ मा जीपीए २.० वा ४५ प्रतिशत ल्याएकाले पढ्न पाउँछन् ।
बीएचसीएम किन पढ्ने ?
स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापक बन्न
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान गर्न
देशको सेवा गर्न
बिरामीको हेरचाह गर्न
बिरामीमैत्री अस्पताल बनाउन
यसअन्तर्गत म्यानेजमेन्ट, स्वास्थ्य र आईटीका विषय पढाइ हुने गरेको छ । दक्ष व्यवस्थापक उत्पादन गर्ने विषयहरु कोर्समा समावेश गरिएको हुन्छ । जस्तै :
मानिससँग घुलमिल गर्न रुचाउनेले
वाक् क्षमता भएकाले
सेवा भाव भएकाले
बीएचसीएम चार वर्षे कोर्स हो । चार वर्षमा ८ वटा सेमेस्टर हुन्छन् । यसका लागि ५ देखि ६ लाखसम्म खर्च लाग्छ । तर, क्याम्पसले दिने सेवा सुविधाका आधारमा शुल्कमा केही तलमाथि हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई विभिन्न जिल्ला भ्रमण, प्राक्टिकल, खेलकुदलगायतका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले क्याम्पसले त्यहीअनुसार शुल्क निर्धारण गर्छ ।
एक सेमेस्टरमा एउटा क्याम्पसमा ४८ जनाको मात्र कोटा हुन्छ । ४८ जनामध्ये पाँच जनाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विश्वविद्यालयले छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा लिन्छ । परीक्षामा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेले छात्रवृत्ति पाउँछ । छात्रवृत्ति पाउनेको नाम विश्वविद्यालयले क्याम्पसमा पठाएपछि ती विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउँछन् । छात्रवृत्ति परीक्षामा सरकारी विद्यालयमा पढेका सहभागी हुन पाउँछन् ।
विद्यार्थीले कम्तीमा तीनवटा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । हस्पिटल, एनजीओ, आईएनजीओ र ग्रामीण क्षेत्रमा गएर अनिवार्य रुपमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने हुन्छ । ८ सेमेस्टरसम्म तीनवटा इन्टर्नसिप र विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । इन्टर्नसिप गर्दा गर्दै सोही कम्पनीमा काम गर्ने अवसर पनि मिल्छ ।
बीएचसीएम पढाइ हुने क्याम्पस
नेपालमा सन् २००० बाट ब्याचलर इन हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट (बीएचसीएम)को चार वर्षे कार्यक्रम सुरु भएको हो । पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत मात्र सेमेस्टर प्रणालीमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
क्याम्पसहरु ९० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन सफल भएका छन् । अहिले नेपालमा छवटा क्याम्पसले उक्त कार्यक्रम पढाउँदै आएका छन् ।
इम्पेरियल बिजनेस कलेज, कमलादी, काठमाडौं
नोबेल कलेज, सिनामंगल, काठमाडौं
सेन्ट्रल कलेज अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट, सिनामंगल, काठमाडाैं
नेसनल ओपन कलेज, सानेपा, ललितपुर
अथर्भ कलेज, बाँसबारी, काठमाडौं
एमिटी कलेज, महेन्द्रनगर
अस्पताल (सरकारी, प्राइभेट र सहकारी)
औषधि उत्पादन कम्पनी
के काम गर्ने ?
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न व्यवस्थापक र प्रबन्धकको आवश्यक पर्छ । बिरामीको उपचारमा चिकित्सक संलग्न हुन्छन् । तर, हस्पिटल सञ्चालनका लागि चिकित्सकले समय दिन सक्दैनन् त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाबाट चुस्त र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने काम व्यवस्थापकको हो । अस्पताललाई कति चिकित्सक चाहिन्छ ? अस्पतालमा कस्ता कस्ता सेवा राख्ने ? पूर्वाधार कस्तो बनाउने ? यस्ता विषयको समाधान गर्ने काम व्यवस्थापक तथा प्रबन्धकको हो ।
एनजीओे र आईएनजीओ
पछिल्लो समय एनजीओे र आईएनजीओले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो छ । ती कार्यक्रमको व्यवस्थापन पनि बीएचसीएम पढेकाले नै गर्दै आएका छन् । यस कारण, एनजीओे र आईएनजीओले बीएचसीएम पढेका व्यक्तिलाई कामका लागि अवसर दिने गरेको छ ।
औषधि उत्पादन कम्पनी खुल्ने क्रम बढ्दो क्रममा छ । ती कम्पनी सञ्चालनका लागि कर्मचारी आवश्यक पर्छ । कम्पनीलाई नाफामा लैजान र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी बनाउनु व्यवस्थापकको कर्तव्य हो त्यसैले औषधि कम्पनीमा बीएचसीएम पढेका व्यक्तिको माग बढ्दो छ ।
मेडिकल कलेज खोल्न व्यवस्थापकको आवश्यकता पर्छ । राम्रो चिकित्सक उत्पादन हुनुमा व्यवस्थापकको मुख्य हात हुन्छ । विद्यार्थीलाई कस्तो वातावरणमा शिक्षा दिने र कस्तो डाक्टर उत्पादन गर्ने भन्ने भूमिका व्यवस्थापकको हो त्यसैले मेडिकल कलेजमा बीएचसीएम पढेका व्यक्तिको माग धेरै छ ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य कार्यालय खुल्दै छन् । गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रका स्वास्थ्य संस्थामा काम पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
कति आम्दानी गर्न सकिन्छ ?
बीएचसीएम पढेका विद्यार्थी बेरोजगार बस्नुपर्दैन । ब्याचलर कोर्स सकेपछि नेपालमै मासिक ३० हजारसम्मको जागिर पाइन्छ । सुरुवातमा ३० हजार भए पनि त्यसपछि बढ्दै जाने भएकाले लाखौं तलब पनि हुन सक्छ । आफ्नो क्षमता र कामका आधारमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
ब्याचलर कोर्स गरेपछि विदेशमा गएर पनि पढ्न सकिन्छ । विदेशमा पढ्दै काम गर्न पनि मिल्छ । अन्य विषयको भन्दा यो विषय पढेका विद्यार्थीले पीआर पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिको माग धेरै भएकाले भिसा छिटो लाग्ने गरेको छ । युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका देशमा यो कोर्स पढाइ हुन्छ । विदेश गएर वार्षिक कम्तीमा २५ लाखसम्म कमाउन सकिन्छ ।
विद्यार्थीको क्षमता र समाजमा पार्ने प्रभाव
बीएचसीएमले विद्यार्थीमा आत्मनिर्भर हुने क्षमताको विकास गर्छ । आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सिकाउँछ । कसैको आस र भरमा जिउनुपर्दैन । मानवता र मानवीयताका विषयमा पनि राम्रो ज्ञान आर्जन गर्नुका साथै त्यसलाई समाजमा कार्यान्वयन गराउने क्षमता राख्छन् । सहयोगी भावनाको विकाससँगै देशको सेवामा प्रतिबद्ध हुन्छन् ।
नेपाल संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य संस्था खोल्ने क्रम बढेको छ त्यसैले ती स्वास्थ्य संस्थाका लागि कुशल व्यवस्थापकको खाँचो छ । अन्य विषय पढेकाले पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने त होइन तर यही विषय पढेकामा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान र सीप धेरै हुने भएकाले यसको माग अत्यधिक छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन गर्न बीएचसीएम कोसेढुंगा
प्रजितकुमार तिमल्सिना, प्रधानाध्यापक, इम्पेरियल बिजनेस कलेज
पछिल्लो समय बीएचसीएम विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन गर्न बीएचसीएम कोसेढुंगो साबित भएको छ । अस्पतालमा डाक्टर र नर्सको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने काम बीएचसीएम पढेका व्यवस्थापकको हो ।
अस्पतालमै काम गर्ने अवसर मिल्ने भएकाले डाक्टर र नर्सको विकल्पका रूपमा पनि विद्यार्थीको रोजाइमा बीएचसीएम परेको छ।
बीएचसीएम पढेर नाम र दाम कमाउनेहरु
पछिल्लो समय बीएचसीएम पढेकाले पनि नाम र दाम कमाएका छन् । बीएचसीएम पढेर सफलता हात पारेका केही व्यक्तिका अनुभवलाई हामीले समेटेका छौं ।
नेपालमै बसेर राम्रोसँग जीवन् चलाउन सक्षम
उमेश दवाडी : कार्यक्रम संयोजक, नोबेल कलेज
उमेश दवाडीको सपना डाक्टर बन्ने थियो । तर, उनले एमबीबीएसमा नाम निकाल्न सकेनन् । अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अन्योलमा थिए उनी । उनले नेपालमा अस्पतालसँग सम्बन्धित बीएचसीएम पढाइ हुने थाहा पाए । अनि, नेसनल ओपन कलेजमा यसबारे बुझ्न गए । उनलाई चित्त बुझ्यो । सन् २००२ मा उनी बीएचसीएम कोर्समा भर्ना भए ।
‘कोर्स नयाँ थियो, अन्योलबीच पढ्न सुरु गरियो,’ उनले भने, ‘रिस्क लिएकाले आज सफल भएको छु । पढ्दा पढ्दै भरतपुर अस्पतालमा म्यानेजर भएर काम गर्ने अवसर मिल्यो । तलब पनि राम्रो थियो ।’
उनी अहिले काठमाडौंको नोबेल कलेजमा कार्यक्रम संयोजक छन् भने इम्पेरियल बिजनेस कलेजमा पढाउँछन् । उनीसँगै पढेका धेरै साथी विदेश पलायन भए । त्यहाँ गएर के काम गर्छन्, थाहा छैन । तर, उनी नेपालमै बसेर राम्रोसँग जीवन् चलाउन सक्षम छन् ।
‘विदेशमा भएका साथीले कमाएको बराबर मैले आफ्नै माटोमा कमाउन सकेको छु,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रमा मेहनत गर्नेले नाम र दाम दुवै कमाएका छन् ।’
सुस्मा तामाङ : विद्यार्थी
सुस्मा तामाङको पनि उस्तै कथा छ । उनी बीबीए पढ्न चाहन्थिन् । तर, बीएचसीएमका विषयमा उनले राम्रोसँग बुझिन् । राम्रो लागेपछि सोही विषय उनले छनोट गरिन् । अहिले इम्पेरियल बिजनेस कलेजमा अध्ययनरत छिन् । उनी इन्टर्नसिपका लागि ग्रान्डी अस्पताल गएकी थिइन् ।
अस्पतालले इन्टर्नसिप गर्दा गर्दै उनलाई जागिरको मौका दियो । उनी अहिले पढाइ र जागिरलाई सँगैसँगै अगाडि बढाउँदै छिन् । तामाङ भन्छिन्, ‘अस्पतालमा भयो भने बिरामीको सेवा गर्न पाइन्छ । आफ्नो काम र पढाइबाट खुसी छु । यही क्षेत्रबाट देशको सेवामा लाग्छु ।’
हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट पढेका अस्पतालको रोजाइमा
विजय रिमाल, महाप्रबन्धक, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल
राम्रो व्यवस्थापक नहुँदा नेपालमा अस्पतालको सेवा धेरैपछि परेको छ । डाक्टर आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ हुन्छन् । तर, अस्पताल सञ्चालनमा दख्खल नहुन सक्छन् त्यसैले अस्पतालको व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट पढेकालाई नै प्राथमिकता दिन थालिएको छ ।
अस्पतालको फाइनान्स, मार्केटिङ, व्यापार, पूर्वाधारलगायतका विषमा डाक्टरलाई भन्दा व्यवस्थापकलाई बढी थाहा हुन्छ त्यसैले नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले अहिले १०/१५ जना व्यवस्थापकका रूपमा हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट पढेकालाई नै नियुक्त गरेको छ । जसका कारण अस्पतालको सेवा चुस्त हुन सकेको छ ।
म्यानेजमेन्ट पढेकालाई नै व्यवस्थापकको जिम्मा
विनोद अधिकारी, व्यवस्थापक, ओम हस्पिटल
उपचारका लागि आउने बिरामीलाई राम्रो वातावरणमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु व्यवस्थापकको भूमिकामै पर्छ । डाक्टले उपचार गर्ने हो तर उपचारका लागि राम्रो वातावरण बनाइदिने काम व्यवस्थापकको हो । बिरामीका लागि चाहिने दक्ष डाक्टर उपलब्ध गराउनेदेखि अस्पतालको प्रशासनिक काम व्यवस्थापकको काँधमा हुन्छ ।
अस्पताल भन्नेबित्तिकै डाक्टर र नर्स भन्ने बुझिन्छ । तर, डाक्टरको काम आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने अस्पतालमा प्रशासनिक काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डाक्टर र व्यवस्थापक दुवैले आ–आफ्नो काम गरे मात्र अस्पताल राम्रोसँग चल्छ त्यसैले पछिल्लो समय हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट पढेकालाई नै व्यवस्थापकको जिम्मा दिइएको छ ।
नेपालका स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहमा स्वास्थ्य संस्था खुल्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहमा ७ सय ५१ वटा स्वास्थ्य संस्था खुल्ने प्रक्रियामा छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको हस्पिटल खोल्ने घोषणा गरेकाले ती संस्थाका लागि दक्ष व्यवस्थापकको आवश्यक पर्छ ।
तसर्थ, बजारमा व्यवस्थापकको माग बढ्दो छ । अर्कातर्फ अहिले पनि जटिल रोगको उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ तर गरिबसँग उपचारका लागि बाहिर जान सक्ने क्षमता छैन । दक्ष डाक्टर भए पनि उपचार गर्ने उपकरण र व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा फितलो बनेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन दक्ष व्यवस्थापक उत्पादन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १६, २०७६, २०:०२:००
भारत र अमेरिका आक्रमणकारी शक्ति हुन्, चीनसँग मिलेर जानुपर्छ
'कारागारमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो'
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रको स्पष्टीकरणः चित्त दुखाउने आशय होइन
भारतको हस्तक्षेपका कारण नेपाल डुबानमा : गृहमन्त्री थापा